Bogga ugu weyn / Codsiyada / Kuleylka kuleylka / induction kuleylka giraangiraha aluminium ee rinjiyeynta buufin
Category: Kuleylka kuleylka Tags: wheel aluminium, aluminium kuleylka kuleylka, aluminium preheater preheater, gawaarida gawaarida preheating, kululeynta kuleylka, horay u qaboojinta, aluminium kuleylka kuleylka ah, induction preheating gawaarida gawaarida, giraanta kuleylka kuleylka, inta badan dhexdhexaad ah, kuleylka dhexdhexaadka ah, kululaynta, preheating wheel aluminium, preheating aluminium gawaarida gawaarida
aluminium kuleylka kuleylka kuleylka ah loogu buufiyo rinjiyeynta
Ujeeddo: Codsigan rinjiyeynta buufin wuxuu u baahan yahay horay u kululaynta maaddada. Intaa waxaa sii dheer, waxaa jira shuruud ah in maaddadu aysan ku qaboojin ka hooseyn heerkul bartilmaameed cayiman kahor buufinta.
Waxyaabaha : Qaybaha macaamiisha ay bixiso
Heerkulka : 275 ºF (135 ºC)
DW-MF-70kW nidaamka kuleylka induction, oo ku qalabaysan mashiinka shaqada fog oo ka kooban saddex 27 μF capacitors wadar ahaan 81 μF
- Qalab kuleyliyaha kuleylinta ee loogu talagalay loona sameeyay si gaar ah codsigan.
Habka kuleylka kuleylka
Isku-darka isku-dhafan ee isku-dhafan ee isku-dhafan / isku-dhafan ayaa loo isticmaalaa. Gawaarida aluminium ee 22 ”ayaa la geliyaa gariiradda oo la kululeeyaa 30 ilbiriqsi heerkulkeedu yahay 275 ºF. Marka kuleylka la joojiyo, qaybtu waxay ku sii jirtaa ama ka sarreysaa 150 ºF illaa 108 ilbidhiqsi, iyadoo la fulinayo shuruudaha kuleylka ee bartilmaameedka ah.
-Kulleynta kuleylka labiska ee giraangirta
Xakamaynta saxda ah ee kuleylka iyo qaabka
-Hufnaanta; kharashka tamarta oo yaraaday